China Umtya wefowuni yomtya kunye nabenzi | SJJ
Umtsalane wefowuni, umtya wefowuni, umtya wefowuni nantoni na oyifunayo, uqinisekile ukuba uya kuyifumana kumzi-mveliso wethu. Ifumaneka kwizinto ezahlukeneyo, ukugqiba, imibala kunye nezixhobo.
Sigxile ekuveliseni umtya weeselfowuni kwaye besithumela kulo lonke ilizwe amashumi eminyaka, le siyenzileyo sinoluhlu olukhulu olufumaneka ngobukhulu obahlukeneyo, uyilo kunye nezitayile. Sinikezela ngeziyilo zesiko ezikumgangatho ophezulu zeefowuni zeeselfowuni kubathengi behlabathi, nokuba yeyodidi okanye uyilo lwefashoni esinokukunceda ukuba uyigqibe. Sinikezela ngePatone Colour Chart iinketho kunye nezixhobo ukuze wenze eyakho imitya yeselfowuni.
Imitya yeselfowuni ilungele iifowuni eziphathwayo, mp3 / 4 abadlali, ikhamera, isitshixo kunye nezinye izixhobo, ezinomngxunya okanye iluphu. Umtya ohlala ixesha elide kwaye ukhululekile ukuba ungayixhoma esihlahleni sakho, uthintele isixhobo sakho ekuweni ngengozi kwaye ugcine isixhobo sakho sikhuselekile xa usisebenzisa, kananjalo vumela isithupha sakho ukuba sihambe ngohlangothi, ungasifaka ngokukhawuleza kwaye ngokulula. Zininzi izitayile zamakhubalo ezikhoyo, ezinje ngabalinganiswa abancinci bomfanekiso, i-rhinestone crystal charms, kunye nezinto ezinomtsalane zezilwanyana kwizinto ezahlukeneyo. Ezinye izinto ezinokuthandeka zinokude zikhanyise okanye zikhanyise xa kukhala ifowuni. Amakhubalo amaninzi akwanentsimbi encinci eqhotyoshelweyo okanye oonobumba abavela kwii-franchise ezithandwayo zamva nje, ezinje ngeyona nkwenkwezi idumileyo okanye ividiyo eshushu nkqu nemidlalo, enokuba lukhetho olufanelekileyo lwendoda nomfazi ekuhombiseni nasekubalaselweni ebomini babo, kukwakho amanye amakhubalo anokuthi umntu abeke emnweni ukucoca umboniso wesixhobo. Ke nokuba injani na umbono wakho, yamkelekile ukuba wabelane nathi kwaye siya kuyenza ngokwenyani.
Material: Flexible PVC, abicah, Ithwathwa, eco-friendly kwaye non-ityhefu
Uhlobo: Uhlobo olwahlukileyo lokukhetha kwakho okanye isiko uyilo lwakho olwahlukileyo.
Izixhobo: Umtya wefowuni ophathwayo, umsesane we-D, irivet, iklipster ye-lobster kunye neeringi ezi-2 zokutsiba.
Imitya yefowuni ishushu kwaye ilungile kwishishini, ukwazisa, intengiso, isikhumbuzo, ezemidlalo kunye neminyhadala.
Egqithileyo Iibhokisi zeepensile kunye neMicimbi yePensile
Okulandelayo: Umcoci weScreen sefowuni
Umtya weFowuni yesiFono
Umnxeba weCharm Strap